Ukusebenza okulula, okuzenzakalelayo ngokugcwele
[i-imeyili ivikelwe] The FRCRP/SAA (C-Reactive Protein/ Serum Amyloid A) Reagent Kit is intended to quantitatively determine the concentration of C-reactive protein and Serum Amyloid A in human serum. Clinically, the two indicators are mainly used as inflammatory markers.
I-CRP yiprotheni (yesigaba esibuhlungu) egazini ekhuphuka ngokushesha lapho umzimba uthelelekile noma lapho izicubu zilimele. Yenza kusebenze futhi kuqinise ukungeniswa kwe-phagocyte, kususe i-microorganism ye-pathogenic ne-histiocyte ehlaselwe eyonakele, i-necrotic noma i-apoptotic. Lapho isetshenziswa njengesibonisi esibucayi kakhulu sempendulo yesigaba esibucayi, izinga leCRP egazini lihlangabezana nokwanda okusheshayo futhi okuphawulekayo futhi lingafinyelela ezikhathini ezijwayelekile ezingama-2000 esimweni se-infarction ebucayi ye-myocardial, isilonda, ukutheleleka, ukuvuvukala, ukuhlinzwa kanye nokungena ngaphakathi . Ukulinganiswa kweCRP kusiza ukulandela inkambo yezifo lapho kuhlanganiswa nomlando wokwelashwa.
Uhlelo lokuphendula isigaba se-Liquid, usebenzisa i-latex immunoturbidimetry methodology kuholela kumphumela onembile
Umphumela utholakala ngemizuzu engu-9